N'ike mmụọ nsọ: Tom Peters | Martech Zone
Wednesday, September 13, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Enwere m ụbọchị siri ike. Enwere m izu ike. Ma eleghị anya ọ bụ otu ọnwa. Achọrọ m ụfọdụ mmụọ nsọ. Taa, m enyocha ole na ole slide si Tom Peters, lee ụfọdụ ndị ọkacha mmasị ịkọrọ:
Ọ bụrụ na ịchọghị mgbanwe, ị gaghị achọ ihe na-adịghị mkpa ọbụlagodi. - General Eric Shinseki, Onye isi ndị ọrụ. Ndị agha US
Naanị ịchụso ihe ọhụrụ na-eme mgbe niile nwere ike hụ na ọ ga-aga nke ọma ogologo oge. - Daniel Muzyka, Dean, Sauder School of Business, Univ nke British Columbia (FT / 2004)
Ndị Na-agbawa agbawa Ka Na Ìhè - Tom Peters
Azụmaahịa anyị chọrọ mmịnye oke nke onyinye, na ekwere m na ọ ga-ahụkarị n'etiti ndị na-ekweghị ekwe, ndị mgbagha na ndị nnupụisi. - David Ogilvy
Ndị mmadụ chọrọ ịbụ akụkụ nke ihe buru ibu karịa onwe ha. Ha chọrọ ịbụ akụkụ nke ihe ha ga-anya isi na ya, na ha ga-alụ ọgụ maka, chụọ àjà maka, tụkwasị obi. - Howard Schultz, Starbucks (IBD / 09.05) Ọgwụgwụ
Ọ bụrụ na o yie ka ị chịkwaa ihe, ị gaghị aga ọsọ ọsọ. - Mario Andretti
Nzọụkwụ mbụ a na-eme ihe ngosi? nhazi usoro ihe doro anya bụ mgbanwe onwe onye dị egwu! - RG
Ahụ nwere ike ime ka à ga-asị na ọ hụrụ ya n'anya, mana ha enweghị ike ime ka hà nọ ebe ahụ. - Texas Bix Bender
Pasent iri itoolu nke ihe anyị na-akpọ â 'managementâ ?? mejupụtara ime ka o siere ndị mmadụ ike ime ihe. â ?? ?? Peter Drucker
Ogbugbu bu usoro nhazi nke ikwurita okwu banyere ihe na ihe, gbasosie ike, na ijide ntule. - Larry Bossidy & Ram Charan / Ogbugbu: Ntụnọ nke Inweta Ihe Eme
Ndị na - arụ ọrụ sọftụwia dị elu na - arụpụta karịa ndị nrụpụta sọftụwia na - esiteghị na 10X ma ọ bụ 100X, ma ọ bụ ọbụna 1,000X, mana 10,000X. '' - Nathan Myhrvold, onye bụbu Chief Scientist, Microsoft
Na ọkacha mmasị m:
Nye ndị ọrụ gị ohere ọ bụla ka ha mee nke ọma, ọ bụrụ na ha enweghị ike ịga nke ọma, nye ha ohere ịga nke ọma n’ebe ọzọ. Mgbe ụfọdụ nke ahụ pụtara ịchụ ha n'ọrụ. - Agaghị m echeta onye gwara m ihe a, mana ọ rapaara m n’ahụ.
Ọ dị m ka ya bụrụ na m ga - agagharị ụbọchị niile ma kwugharịa ihe ndị a ugboro ugboro. ma nwee olile anya na ọ dịkarịa ala otu onye na-ege ntị.
Omume Brain - na ntakịrị ihe gbasara Doug
Sep 14, 2006 na 9: 18 AM
Ihe Peter Drucker kwuru bụ ọkacha mmasị m, ezigbo post Doug.
Sep 14, 2006 na 1:22 PM
Eeps, olile anya na emebeghị m izu gị ka njọ, ikekwe m bụ onye na-echegharị uche?
My ọkacha mmasị bụ, “The Cracked Ones Let in the Light” - Tom Peters, dị ka m bụ n'ezie a gbawara agbawa otu. Na-esochi nke ahụ bụ okwu Mario Andretti, dịka m kwesịrị ige ntị na nke ahụ ma ghara ịkpachara anya. N'ikpeazụ, ọ masịrị m, ”Nzọụkwụ mbụ na 'ihe dị egwu'. usoro mgbanwe nhazi doro anya "mgbanwe onwe onye dị egwu!" - RG, agbanyeghị na anụrela m mkpụrụokwu ka mma maka ya, dị ka, ịkọwapụta, “Ọ bụrụ na ịchọrọ imeri ụwa, nke mbụ ị ga-emerịrị onwe gị” ma ọ bụ, “Ntughari adịghị amalite site na usoro mmekọrịta akụ na ụba na ọha mmadụ. ma na arụ ọrụ n'ụzọ gbadara onye ahụ, mana n'ime otu onye, ​​na-arụ ọrụ ọ ga-eduga n'usoro mmekọrịta ọha na eze na akụnụba nke ọha mmadụ ”. Ọzọ ndị a bụ paraphrases, nke mbụ nwere ike ịbụ site na Art of War, ma ọ dịkarịa ala site n'aka onye ọkà ihe ọmụma ọwụwa anyanwụ m chere; nke abụọ bụ, kwere ya ma ọ bụ, si Joseph Bueys, otu nke ọkacha mmasị m nka, ifịk ke 60 na 70 tumadi.
Na onye bụ RG?
Sep 14, 2006 na 6:46 PM
Gwa gị okwu abụwo ihe obi ụtọ. Oge siri ike m emetụtaghị na ịde blọgụ m, ọ bụ mpụpụta m!
Amachaghị m onye RG bụ… ọ bụ ntụnye maka otu ihe ngosi Tom Peter.
Ekwenyere m na gị ma dịka eziokwu ahụ na okwu ndị a niile chọrọ ka mmadụ mee ihe na naanị ihe ha na-achịkwa na-agbanwe = onwe ha!